Carlo Ancelotti Oo Diyaar U Ah In Uu Kooxda Ku Hayo Gareth Bale
Home Wararka Ciyaaraha Carlo Ancelotti oo diyaar u ah in uu Kooxda ku Hayo Gareth...
Real Madrid tababare Carlo Ancelotti waxaa lagu soo waramayaa in la siiyo Gareth Bale fursad labaad, iyadoo si ku laabanayo Tottenham Hotspur hadda loo yaabo.
Xiddiga reer Wales ayaa xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay Spurs, ka dib markii uu boos joogto ah ka waayey tababarihii hore ee Los Blancos Zinedine Zidane .
Ancelotti, oo mar kale loo magacaabay bedelka Zidane bishii Juun, wuxuu ahaa tababarihii Bale kala soo saxiixday Tottenham 2013 isagoo markaas ku qaatay adduun dhan 85 milyan oo ginni, sida laga soo xigtay AS , macallinka reer Talyaani wuxuu diyaar u yahay inuu gacanta u geliyo xiddiga garabka ka ciyaara fursad kale.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegeysa, in 32-sano jirkaan – oo hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa – uu ka fiirsanayo inuu u dhaqaaqo MLS, ka hor inta uusan Wales u matalin Koobka Adduunka ee 2022 ee Qatar, isagoo qorsheynaya inuu markaas ka fariisto kubada cagta xagaagaas.
Waxaa jira walaac ku saabsan rikoorka dhaawaca Bale, in kasta oo Ancelotti uu ku rajo weyn yahay in laacibka reer Wales uu soo saari karo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa Real xilli ciyaareedka soo socda, isagoo kula biiraya weeraryahanada Karim Benzema iyo Eden Hazard .
Ka hor inta uusan si ku meel gaar ah ugu biirin Spurs xagaagii la soo dhaafay, Bale wuxuu u saftay Real Madrid 251 kulan tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 105 gool isla markaana caawiye ka noqday 68 kale.
Previous articleBarcelona oo u bandhigeysa Kooxda Manchester United Xidigeeda Antoine Griezmann
Next articleWararka Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo Dalabkii ugu danbeeyay ka gudbineysa Haaland, PSG oo lasoo wareegeysa Ronaldo iyo Qodobo kale